अब्बल स्वास्थ्यको राज « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
अब्बल स्वास्थ्यको राज
२०७८, १७ बैशाख शुक्रबार १५:१८ मा प्रकाशित
गणेश राज पोख्रेल सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) हुनुहुन्छ । उहाँ निकै उर्जावान देखिनुहुन्छ । सिटिजन्स बैंकको म्यानेजरबाट उहाँको बैंकिङ करियर शुरु गर्नुभएको हो । पोख्रेलको लगाव र कुशल व्यवस्थापनका कारण बैंक डिजिटल टेक्नोलोजीमा प्रवेश गरेको छ । डिपोजिट ६५ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । कर्जा प्रवाह ९२ अर्ब भन्दा माथि पुगेको छ । मोवाइल बैंकिङ कारोबार ३ गुणाले बृद्धि भएको छ । डेविट कार्डहरुको प्रयोग दोब्बरले बढेको छ । मुलुकभर बैंकका शाखा १८८ पुगिसकेको छ । शेयर मूल्य पनि राम्रै बृद्धि भएको छ । बैंकलाई लोकप्रीय बनाउन पोख्रेल कम्मर कसेर लागिपर्नुभएको छ । सकारात्मक सोचका धनि पोख्रेलको मन मस्तिष्कलाई फराकिलो बनाएर अघि बढ्ने स्वभाव छ । साथै कर्पोरेट सिस्टमको विकास गर्नुभएको छ । यसले लक्ष्यमा पुग्न मद्धत गरेको छ । आर्थिक कारोबारसँग खेल्ने बैंकर्सहरु स्वास्थ्यप्रति कातिको सचेत र सजग हुन्छन् ? उनीहरुको जीवनशैली कस्तो छ ? भन्नेबारे जानकारी दिन जनस्वास्थ्य सरोकारको यस अंकमा हामीले सिटिजन्स बैंकका उनै सिईओ पोख्रेललाई प्रस्तुत गरेका छौं उहाँको आफ्नै शव्दमा …..
हरेक दिन ४ः५५ मा उठ्छु । बिहान रेडियो नेपालमा गुञ्जने पशुपतिनाथको आरती र शंखध्वनीले मानसिक रुपमा निकै आनन्द प्रदान गर्छ । आफ्नो विछ्यौनाको छेउमा ठूलो रेडियो राखेको छु । त्यसपछि स्टाफहरुको वर्थ डे वीस गर्छु । हरेक दिन ४—५ जनाको जन्मदिन परिरहन्छ । हरेक दिन हरिदास महाराजको प्रवचन र जीवन विज्ञान सुन्न छुटाउँदिन ।
हरेक दिन ५.२० बजेतिर अघिल्लो दिनको बैंकिङ गतिविधिबारे संचालक समितिलाई रिपोर्ट गर्ने तालिका बनाएको छु । ६ बजेको संस्कृत समाचारपछि अन्य समाचार सुन्दै छोरीलाई भैंसेपाटी चोकबाट कलेज बस चढाउँछु । त्यसपछि आधा घण्टा भैंसेपाटी चोक एक फन्को लगाएर घर पुग्छु ।
२ गिलास मनतातो पानी पिउँछु । दूधको चिया आनन्दले पिएपछि एक घण्टा बैंकिङ सम्बन्धित पुस्तक अध्ययन गर्छु । त्यसपछि शुरु हुन्छ व्याडमिन्टन खेल । ७.३० बजेतिर खलखल पसिना आउने गरी दुई गेम जति व्याडमिन्टन खेल्छु । घर पुगेर एक गिलास पुनः तातो पानी पिउँछु । आफैं कपडा आइरन गर्छु । पानीको वाफ लिन्छु । त्यसपछि एक कप पुनः दूधको चिया पिउँछु र नुहाएर खाना खाएर बैंक प्रस्थान गर्छु ।
उमेरः ५० वर्ष
पुख्र्यौली घरः बर्दिया
हालः भैंसेपाटी ललितपुर
उचाईः ५ फिट १० इन्च
शारीरिक तौलः ७० के.जी.
गत वर्ष कात्तिक ५ गते ठूलो सडक दुर्घटनाबाट बाँचे । अलिअलि घाँटी दुख्ने समस्या छ । त्यसैले कुरा गर्दागर्दै घाँटीको एक्सरसाइज गरिरहन्छु । प्रणायाम गर्न पनि भुल्दिन । मलाई कडा खेल नै मन पर्ने भएकाले व्याडमिन्टनले स्वस्थ्य रहन निकै मद्धत गरेको छ । व्याडमिन्टन खेल्दा दुवै हात चल्छन् । मर्निङ वाक मेरो दैनिकी नै हो ।
कुनै रोग छ ?
चिसो लाग्छ ?
मलाई अत्यधिक चिसो लाग्ने भएकाले धेरै तातो चिजहरुको उपयोग गर्नुपर्छ । तातो कोठामा फ्रेस महसुस गर्छु ।
खानपान र क्यालोरी
मलाई यो बारेमा त्यति ज्ञान त छैन । तर ठिक्क खाएपछि क्यालोरीमा ध्यान दिइरहनुपर्ला जस्तो लाग्दैन । ब्रेकफास्ट खाने बानी छैन । बिहान ९ बजे सामान्य दालभात खाएर कार्यालय आउँछु । खानामा मसुरीको दाल, टमाटरको अचार र घिउ राखेर खान निकै मन पर्छ । दिउँसोको खाजाका रुपमा कार्यालयमा दुई वटा गहुँको रोटी सेवन गर्छु । कार्यालयमा दिउँसो १२ बजेतिर फलफूलहरु प्रशस्त खाने गरिन्छ ।
बैंकको सिईओ भइसकेपछि हरेक डिपार्टमेन्टका साथीहरुसँग कहिलेकाँही बसेर खाने छुट्टै कुरा हो । अन्यथा घरकै खाना खाना मन पर्छ ।
उपवास बस्ने कुनै नियमितता छैन । हरेक वर्ष कृष्ण जन्माष्टमीका दिन उपवास बसेर भगवान कृष्णको आराधना गर्छु ।
साथीभाइहरुसँग बसेको बेलामा कहिलेकाँही ड्रिङ्स गरिन्छ । प्रायः ६० एमएल भन्दा बढी पिउँदिन । ड्रिङ्स गर्ने बानी पनि काठमाडौंमा आएर सिकेको हो ।
गर्दिनँ र कहिल्यै पनि गरिएन ।
हेल्थ चेक अफ
बैंकमा काम गर्न थालेपछि वर्षमा एकपटक होल वडी चेक अप गर्छु ।
हरेक दिन बेलुका १० देखि १०.३० को बीचमा सुतिसक्छु । मलाई मस्त निन्द्रा लाग्छ । बिहान ४.५५ मा उठिसकेको हुन्छु ।
‘क्षण भंगुरता’ भन्ने हरिदासजी महाराजले भन्ने गरेको शव्ददेखि निकै प्रभावित छु । क्षण भंगुरता भएको व्यक्ति कतिबेला मर्छ भन्ने थाहा नै नहुने रहेछ । राति सुतेपछि र बिहान उठ्ने बेलासम्म जीवन नरहन पनि सक्छ । घर पुगेपछि कार्यालयका सबै तनाव बिर्सनु नै राम्रो हुन्छ । यो मैले नेल्सन मन्डेलाबाट पनि सिकेको छु । मण्डेलाको फर्मुला भनेकै ‘फर्गेट टाइम फर्गेटनेस’ हो । उहाँले आफूलाई २७ वर्षसम्म जेल राख्ने डिकलर्क नामका व्यक्तिलाई माफ गरिदिनुभयो र उसलाई नै उपराष्ट्रपति बनाएर शासन चलाउनुभयो । आज उहाँ महान व्यक्तिका रुपमा नाम कमाउन सफल हुनुभयो ।
त्यसैले जीवनको कुनै भर हुँदैन । कुकर्म गर्न हुँदैन । सकभर कसैको चित्त दुखाउने प्रयास गर्न हुँदैन । राम्रोसँग आफ्नो कर्तव्यपथमा अघि बढ्नुपर्छ ।
हरेकले आफ्नो ध्यान सकारात्मक सोचतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ । सकारात्मक सोचले अनुहारमा मुस्कान ल्याउँछ र सबैबाट माया र स्नेहको वर्षा शुरु हुन्छ ।
सफलता प्राप्त गर्न स्वास्थ्यको ख्याल नगरिएमा दुःख पाइन्छ । त्यसैले सफलता प्राप्त गर्न स्वास्थ्यको ठूलो भूमिका हुन्छ ।
स्वास्थ्य र सम्पत्ति
मेरो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य नै पर्छ । स्वास्थ्य र सम्पत्तिको कुरा गर्दा स्वास्थ्यलाई नै रोज्छु । सम्पत्ति चाहिन्छ तर सम्पत्तिकै लागि मरिहत्ते गर्न हुँदैन ।
‘बैंकलाई राम्रो गर्नुस्, तपाईंको आवश्यकता यसैले पूरा गरिदिने कर्मचारी साथीहरुलाई विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु । हामीले बैंकिङ प्रणालीलाई सपोर्ट गर्ने कर्मचारी राखेकाले तपाईंहरुको लगानी सुरक्षित छ । हरेक वर्ष डबल डिजिटको प्रतिफल दिन्छौं । अत्यन्तै हामी सुसासनमा र कर्पोरेट गभर्नेन्सको पाटोमा सम्झौता नगरी काम गरिरहेका छौं ।
हेल्थ लगानीकर्ताहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
स्वास्थ्यमा लगानी गर्न रेड कार्ड बिछ्याएर यहाँहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं । बैंक उद्यमीहरु जन्माउने संस्था हो । जोश र जाँगर भएका उद्यमीहरुलाई लगानीमा सहयोग गर्ने र एकिकृत पैसालाई राष्ट्रको विकासको मूल बाटोमा दौडाउन हामी सँधै तयार छौं । स्वास्थ्यलाई प्रोमोट गर्ने खालका उद्योगहरुमा लगानी गर्न तयारी छौं । हस्पिटल र औषधि कम्पनिहरुमा हाम्रो राम्रो लगानी छ । मुलुकमा नै गुणस्तरीय औषधि कसरी उत्पादन गर्ने ? भन्नेतर्फ यहाँहरुको ध्यान केन्द्रित होस् । मुलुकमा नै अत्याधुनिक अस्पतालहरु निर्माण गरी विदेशिने ठूलो धनराशीलाई कसरी रोक्ने भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण छ । यसमा खुला दिलले लगानी गर्न तयार छौं ।
बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कोभिड—१९ खोप लगाउन पाउने मौका दिएर गरेको सम्मानप्रति निकै अभारी छु । मैले पनि लगाएँ । सिटिजन्स बैंक परिवारको तर्फबाट हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छ । कोभिडको समयमा बैंकका धेरैजना कोभिड संक्रमित हुनुभयो । एक करोड रुपियाँ जति त पिसिआर परीक्षणलगायत विभिन्न कुरामा खर्च भएको छ ।